Torohevitra 10 ho an'ny volo tsara tarehy sy mahasalama izay tokony hampiharinao isan'andro | Bezzia
Torohevitra 10 ho an'ny volo tsara tarehy sy mahasalama
Susana godoy | | Fandram-bolo
Para manana volo tsara tarehy, mila mampiasa ny torohevitra lehibe isika. Ireo torohevitra ireo dia ampiharin'ny stylists, izay tsy manao afa-tsy ny manahy momba ny fahasalaman'ny volonay foana. Betsaka, marina izany, fa anio kosa dia avelanay ianao miaraka amin'ireo 10 manan-danja indrindra azonao ampiharina.
Satria ny fananana volo tsara tarehy dia efa azo atao. Mazava ho azy, mila manana faharetana kely ianao ary koa fanoloran-tena, fa manome toky anao izahay fa ho avy ny valiny rehefa tsy ampoizinao izany. Misaotra ireto dingana manaraka ho hitanao ireto ahoana ny voajanahary ary koa ny famirapiratana napetraka ho protagonist amin'ny volonao izy ireo.
1 Ny maha-zava-dehibe ny fikosehana amin'ny volo tsara tarehy
2 Hadinoy ny taovolo strappy
3 Ny hafanan'ny rano
4 Manotra fa aza manosotra
5 Ny sarontava no namanao akaiky indrindra
6 Manala volo rehefa lena
7 Menaka ho an'ny volonao
8 Atsipazo ny vy sy ny fanamainana
10 Volo maina foana alohan'ny hatory
Ny maha-zava-dehibe ny fikosehana amin'ny volo tsara tarehy
Fototra izany !. Iray amin'ireo torohevitra tsara tsy azo adino. Mila miborosy volo isan-kariva ianao. Arakaraka ny hateviny na tsia no anananao dia tsy maintsy manome andiana pass ianao. Noho izany, eo anelanelan'ny 15 na 20 no atolotra anao voalohany. Hanomboka eo amin'ny faritry ny toro-hevitra ianao mba tsy hisintona. Hatsarao ny fihodinan'ny ra eo amin'ny hodi-doha.
Hadinoy ny taovolo strappy
Marina fa nanjary nihanatanjaka hatrany ny taovolo volo. Mitovy dika amin'ireo izy ireo effets tousled. Ity no fomba ahazoanao ny updo tonga lafatra fa ny fikolokoloana ny volonao. Satria rehefa manao taovolo tena tery isika dia mijaly ny volo. Ity dingana ity dia mety hahatonga ny volo vaky na hihalemy. Noho izany, satria tadiavinay ny fampirantiana ny volo tsara tarehy, dia hifidy karazana taovolo hafa izahay.
Ny hafanan'ny rano
Raha ny manasa ny volontsika dia tsy maintsy tandremo ny mari-pana amin'ny rano. Satria tsy tokony hafana be mihitsy izy io, satria fihetsika iray hafa manimba azy io. Mafana hatrany ny rano mandritra ny fanasana satria miala amin'izany ny tavy. Ho an'ny fanasana farany, tsy misy toy ny rano mangatsiaka.
Manotra fa aza manosotra
Rehefa manasa ny volontsika isika dia mirona hanao fahadisoana maro ihany koa. Ny iray amin'izy ireo dia rehefa mampihatra ny shampooing dia maosika ny loha matetika toy ny hoe rahampitso tsy misy. Raha mino isika fa amin'izany fomba izany dia hanafoana ny tavy isika, ny mifanohitra amin'izay indrindra no izy. Hampahery anao izahay hivoaka bebe kokoa. Noho izany, nandena ny volo tamin'ny rano mafana izahay aloha. Avy eo, hampihatra ny shampooing isika ary hanao fanorana maivana mba hisarihana ny shampoo, nefa tsy hikosehana.
Ny sarontava no namanao akaiky indrindra
Raha mbola tsy afaka izy ireo dia azonao atao ny manomboka manova zavatra. Satria indray mandeha isan-kerinandro dia tsara kokoa noho ny torohevitra ny hametahana sarontava. Raha ny tokony ho izy dia tokony hiorina amin'ny karazana volo izay ananantsika. Izany hoe, ho an'ny volo miloko, maina, misy menaka, sns. Tsy maintsy apetakao amin'ny volo mando ary avelao izy hiasa raha mbola ilaina izany. Noho izany, aza maika. Ho hitanao ny fomba anampiany anao hamelomana sy hamelombelona ny volonao.
Manala volo rehefa lena
Na dia toa tsy toa izany aza izy dia malemy kokoa rehefa lena ny volo. Ka mila mitandrina tsara foana ianao amin'izany. Raha vao manasa ny lohantsika isika dia tsy maintsy manosotra ny volontsika. Fa ho an'ity dia ampiasao a sisilom-bolo malalaka. Hosokafanay aloha ny farany ary avy eo, ampandalovintsika amin'ny ambin'ny volo izany.
Menaka ho an'ny volonao
Rehefa avy nanasa, conditioner kely ary indray mandeha isan-kerinandro, ilay sarontava. Fa raha tiantsika ho azo antoka fa eo am-pelatanana tsara ny fikolokoloana ny volontsika, dia tsy misy na inona na inona toy ny menaka. Mikarakara ary koa manamboatra volo simba, lavorary izy ireo. Azonao atao ny mampihatra azy ireo indroa isan-kerinandro. Hataonao izany, kofehy amin'ny kofehy mba hahafahan'ny volo rehetra handroboka ny tombotsoan'ny vokatra toy izany. Afaka mampiasa menaka oliva ianao fa manana safidy hafa toa ny menaka voanio na amandy.
Atsipazo ny vy sy ny fanamainana
Miaro azy izahay ary manamboatra azy koa, ka tsy ilaina intsony ny manasazy azy. Noho izany dia be loatra ny vy toy ny fanamainana afaka mijanona ao aoriana izy ireo. Satria ho maina ny volonay. Ny tsara indrindra dia ny fampiasana ny teny hoe mpiaro, fa raha tsy afaka manararaotra ny hafanana isika dia ho dingana manaraka hatrany izany.
Na dia mety tsy ho anao aza izany dia ilaina ihany koa ny sakafo ho an'ny volo tsara tarehy. Raiso iray sakafo voalanjalanja misy hena fotsy toy ny akoho na vorontsiloza ary koa legioma sy voankazo vaovao. Ilaina amin'ny fahasalamana sy volo ny vy sy vitamina ary koa asidra folika.
Volo maina foana alohan'ny hatory
Marina fa amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, ny fihazakazahana dia midika fa tsy manam-potoana hanaovana ny zavatra rehetra isika mandritra ny andro. Saingy misy zavatra iray tsy maintsy ataontsika antoka ary izany dia, maina ny volonao alohan'ny hatory. Raha tsy izany dia hanampy zavamiaina bitika vitsivitsy haka ny loha isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fandram-bolo » Torohevitra 10 ho an'ny volo tsara tarehy sy mahasalama
Mila reny hafa ianao amin'ny fiainanao